ညိုမှိုင်းဝေ (သနပ်ပင်) – ဆောင်းခိုငှက်တို့၏ခရီး (၀တ္ထုတို) | MoeMaKa Burmese News & Media
“ကလင်… ကလင် … ကလင် … ကလင် …”
“ဟဲလို … ကိုကို၊ မေမေ ဆေးရုံတင်ထားရတယ်”
“ဘယ်လို ညီမလေး၊ မေမေဆေးရုံတင်ထားရတယ် ဟုတ်လား”
“ဟုတ်တယ် ကိုကို၊ မနက်က ဘုရားခန်းထဲမှာ မေ့ပြီး လဲကျသွားတာ၊ အခု ဝိတိုရိယမှာ တင်ထားတယ်၊ အခုထိလည်း သတိ မရသေးဘူး၊ ကိုကို့ သူငယ်ချင်း ဒေါက်တာဇော်နိုင်ကတော့ ကိုကို့ကို အမြန်ဆုံးပြန်ခေါ်ပါတဲ့၊ ဒီနေ့ရောက်အောင်ပြန်လာမှ မေမေ့…၊ မေမေ့ အသက် …… ”
“ဟုတ်ပြီ ညီမလေး၊ ကိုကို ဒီနေ့ ဖလိုက်ခ် (flight) နဲ့ ပြန်ခဲ့မယ်၊ ဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့ညီမလေး၊ မေမေ ပြန်ကောင်းသွားမှာပါ”
“သား … ငြိမ်းမွန်၊ အမေ့သားဟာ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် အမေဂုဏ်ယူတယ်၊ ဒါပေမယ့် အမေကျေနပ်တယ် ဆိုတဲ့အဆင့်ထိတော့ မရောက်သေးဘူးသား၊ အမေကျေနပ်နိုင်ဖို့၊ အမေမွေးရကျိုးနပ်တဲ့ သားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အလုပ်လုပ် တဲ့နေရာမယ် တာဝန်ဆိုတာထက် ပိုတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ပါသား၊ ပြည်သူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကို နေရာ၊ အချိန်မရွေးပဲ ကိုယ်ကျိုးမငဲ့ပဲ ကူညီပါ။ အမေဒါပဲ မှာချင်တယ်”
“သြော် … ဒေါ်အိအိချို၊ အလောသုံးဆယ်နဲ့ပါလား၊ Emergency case ရောက်တယ်ထင်တယ်”
“ရောက်တာမဟုတ်ဘူးဆရာ၊ သွားရမှာ။ ဒီကနေ နှစ်ရွာကျော်လောက်က တောင်ပေါ်မှာ မွေးလူနာ မမွေးနိုင်လို့တဲ့ဆရာ၊ ထော်လာဂျီလမ်းလည်း အဆင်မပြေဘူးလို့ပြောတယ်၊ ဆိုင်ကယ်နဲ့တင်ခေါ်လာဖို့ကလည်း လမ်းအခြေအနေရယ် ရာသီဥတု အခြေအနေရယ်ကြောင့် ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဆရာ၊ ကျွန်မတို့အမြန်ဆုံး လိုက်သွားမှဖြစ်မယ်၊ မဟုတ်ရင် မိခင်ရော က လေးရော မလွယ်ဘူးဆရာ”
“ဟုတ်ပြီ … ဒါဆို ကျွန်တော်လိုက်သွားမယ်၊ Drugs & Instuments တွေ စုံအောင်ထည့်ပေးပါ”
“ဆရာ၊ ကျွန်မ ……”
“ဒေါ်အိအိချို ဆေးရုံမှာပဲနေခဲ့ပါ၊ ရာသီဥတုရော လမ်းရောသိပ်ကြမ်းတယ်၊ ဒေါ်အိအိချိုတို့ကို ကျွန်တော် စိတ်မချဘူး၊ ကျွန်တော် ဦးဂျပ်စမ်းကို ခေါ်သွားလိုက်ပါ့မယ်၊ အဆင်ပြေမှာပါ”
“အမေ မွေးရကျိုးနပ်တဲ့ သားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ … …”
“တာဝန်ဆိုတာထက် ပိုတဲ့စိတ်နဲ့ လုပ်ပါသား … …”
“အား …… အမေ့ ၊ အမလေး … နာတယ် အမေရေ့ ……ကယ်ပါ၊ နာတယ်……အမေ”
“ခွဲမှဖြစ်မယ်၊ ကျွန်တော့်ကို ဓါတ်မီးငါးလုံးလောက် ရှာပေးပါ၊ ဦးဂျပ်စမ်း ကျွန်တော့်ကို ကူပါ”
“အူဝဲ …… အူဝဲ …… အူဝဲ …… အူဝဲ”
“ဒီကိုထွက်လာခါနီး …… ကျွန်တော့်အိမ်က ဖုန်းလာတယ်၊ ကျွန်တော့်အမေ ဆေးရုံတင်ထားရတယ်၊ အသက်ပြန်ရဖို့ မလွယ် လောက်ဘူးတဲ့ ”
“ဗျာ …… ဆရာ … အဲ့ဒါကို ……”
“ပူတာအို ပြန်ရောက်တာနဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် လေယာဉ်လက်မှတ်တစ်စောင်ဝယ်ပေးပါဦး ဦးဂျပ်စမ်း”
“ဟုတ် … ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ”
“လလင် … ကလင် … ကလင် … ကလင်”
One Response to ညိုမှိုင်းဝေ (သနပ်ပင်) – ဆောင်းခိုငှက်တို့၏ခရီး (၀တ္ထုတို)
Catwoman on April 8, 2016 at 9:20 am
That s too Hollywood. The doctor hasalife and he s not responsible for the mom or the baby. The pregnant lady should come toahospital where there re hopefully equipment to save lives. The doctor should NOT leave the hospital just to may be savealife because it is very selfish to leave other sick patients who need him. The patients should always come to the hospital if they want to live. The doc should never leave the hospital and hundreds of patients just to May be savealife. The same thing with story about dr mya maung. You never leave patients inahospital to go see someone. That sawaste of time.